मुस्ताङमा प्राविधिक शिक्षा दिने एक मात्र शिक्षालय – Dhawalagiri Technical School
Dhawalagiri Technical SchoolNews/Events, Notice
हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयमा प्रि डिप्लोमा तह अन्तर्गत विभिन्न चार वटा कार्यक्रम संचालनमा छन् । मुस्ताङको एक मात्र प्राविधिक शिक्षालयमा विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । शिक्षालयका प्रमुख खड्ग बहादुर सुब्बासंग अम्बिका मगरले गरेको कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयले हाल के गर्दै छ ?
अहिले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण पठनपाठन बन्द छ । नयां विज्ञापन खुलेको छ अलि दिन भयो हामी त्यसैको आन्तरिक काममा जुटेका छौं । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिराछौ । पांच महिना पढेपछि कोरोना संक्रमण जोखिमले गर्दा सबै विधार्थीहरू आ-आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ ।
शिक्षालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति कुनकुन ठाउंमा छन् ?
पढाई हुने चार वटा विषय हो । प्री-डिप्लोमा कुलिनरी आर्टस्, प्री-डिप्लोमा होटल म्यानेजमेण्ट, प्री-डिप्लोमा कृषि(बाली विज्ञान) र प्री-डिप्लोमा पशु विज्ञान कोर्सहरू सञ्चालनमा छन् । पर्यटकीय क्षेत्रको लागि उत्पादित प्रशिक्षार्थीहरू हाम्रो डाटा अनुसार प्राय होटलहरूमा र वैदेशिक रोजगारमा अलि बढि आकर्षित भएको देखिएको छ । त्यस्तै कृषि तर्फ उत्पादित प्रशिक्षार्थीहरू एनजीओ/ आइएनजीओ र लोकसेवा मार्फत गाउंपालिका अथवा स्रोत केन्द्रहरूमा रोजगार भएको देखिएको छ ।
विधार्थीको आकर्षण कुन विषयमा धेरै छ ?
कृषि विज्ञानमा ४० र पशु विज्ञानमा ४० जनाको कोटा छ अनि कुलिनरी आर्टस्मा ३० र होटल म्यानेजमेन्टमा ३० जनाको कोटा राखेका छौं सबै विषयमा प्रतिस्पर्धा बराबर नै छ । कृषि अलि पछि सुरू गरेको कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा पुरूषको भन्दा पनि महिलाहरूको बढि आकर्षण देखिएको छ ।
हालका दिनमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा के कस्ता चुनौती छन् ?
हाम्रो अलि दुर्गम ठाउंमा रहेको शिक्षालय हो । धौलागिरी अंचलकै पहिलो प्राविधिक शिक्षालय हो । गाउंघरमा प्राविधिक शिक्षाको बारेमा अलि जनचेतनाको र प्रचार प्रसारको अभाव देखेका छौं । प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउनेहरू प्राय आफ्नो सोच र विचारले भन्दा पनि अरू कसैबाट यस्तो स्कुल छ पढ्न जाने केही भैहाल्छ कि भन्ने हिसाबले आएको देखिएको छ । यो शिक्षालयमा मात्र नभई अरू प्राविधिक शिक्षालयमा पनि त्यही हो । सााधारण धारको शिक्षाको प्रचार प्रसार बढि हुने भएको कारणले गर्दा अनि फेरी अहिले त स्कुलमा पनि प्लस टु चलाउनु पर्ने भनिएको छ । मान्छेहरूले व्यावसायिक शिक्षाको भित्री महत्व बुझिसकेका छैनन् र यो शिक्षा हासिल गरिसकेपछि भोली हामी बेरोजगार भएर त्यतिकै बस्नुपर्ने स्थिति हुंदैन भन्ने कुरा पछि पढिसकेपछि मात्र बुझ्छन् । गाउंघरमा जनचेतना र बजारीकरणको कमी र यसको महत्वको बारेमा अलि अनविज्ञ नै भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालयको आगामी योजना के के छन् ?
आगामी योजनाहरू भनेको अहिले हाम्रो चार वटा मात्र विषयको प्री-डिप्लोमाको कोर्सहरू सञ्चालन भैरहेको छ । अब यहांको समुदायको माग अनि बजारलाई हेरेर दुई वटा सम्म तीन वर्षे डिप्लोमाको कोर्सहरू सञ्चालन गर्ने कि भन्ने सोचहरू राखेका छौं । त्यही अनुसार तयारी गरिराखेका छौं ।